Iyo beta 4 yeTVOS 10.2.1 uye watchOS 3.2.2 yevagadziri | Ndinobva mac
Tiri kutarisana nebatch nyowani ye beta shanduro dzeApple uye mune ino kesi tasvika yechina inowanikwa vhezheni ye tvOS 10.2.1 uye watchOS 3.2.2 yevagadziri. Masikati ano beta ye macOS Sierra 10.12.5 uye iOS 10.3.2 saka isu tine mabheji emidziyo yese. Parizvino, shanduro dzevashandisi vari muchirongwa cheveruzhinji beta hachiwonekere asi inyaya yenguva vasati vaburitswa uye zvinotarisirwa kuti zvichawanikwa mumaawa mashoma anotevera.
Mune idzi shanduro dze beta isu tine zvakajairika kugadzirisa mukugadzikana, chengetedzo uye mhinduro yezvikanganiso nezve yapfuura beta vhezheni, asi hapana chimwe chiri mberi kubva pane izvi. Apple inofanirwa kuchengetedza nhau dzeiyo inotevera vhezheni uye iri kuvhura zvigadziriso kune beta vhezheni dzayo masisitimu ekugadzirisa madhigi ari kutaurwa, asi pasina anozivikanwa maficha matsva maererano neanoshanda.
Mune ino kesi, sekutaura kwatakaita ne beta ye macOS Sierra 10.12.5, zvakanaka kuisa parutivi idzi beta vhezheni uye kumirira iyo yekupedzisira vhezheni yeiyo system painotangwa zviri pamutemo, sezvo ivo vasingape chero chinhu chitsva chinogona "kuzadzwa nacho" uye nekudaro zviri nani kugara sezvatiri isu ndiyo yakanyanya kunaka sarudzo. Panyaya yeApple Watch, kurodha beta vhezheni inofanirwa kuti iyo iPhone ivandudzwe, asi dzese idzi shanduro ndedzevagadziri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Beta 4 yeTVOS 10.2.1 uye watchOS 3.2.2 yevagadziri
Teregiramu inovandudzwa kune vhezheni 2.96 nekuvandudzwa mukumhanya kweapp
Google inotangisa Chrome 58 isina kupa rutsigiro rweTouch Bar